दसैंको टीका नसकिँदै भारत जानेको लर्को – Dainik Sangalo
October 30, 2020 281
धनगढी — दसैंको टीका थापेर डोटीको पूर्वी चौकी गैरागाउँका किसन विक लालाबालासहित भारत महाराष्ट्रस्थित बरौलीतर्फ लागे । उनी बिहीबार धनगढीको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा कामका लागि भारत जानेको लर्कोमा एक घण्टाभन्दा बढी समयदेखि सीमा पार गर्न पालो कुरिरहेका थिए ।
भारत जान धनगढीको त्रिनगर भन्सार नाकामा लाम लागेका नेपाली । बिहीबार मात्रै झन्डै १८ सय जना भारत गएका छन्। तस्बिर : मोहन बुढाऐर/कान्तिपुर
Prevपैसा लु, ट्नका लागि बैंकको एटिएम फो, ड्दै गर्दा एक जना प, क्राउ
Nextसामुदायिक वनमा भीषण आगलागी
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126261)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68935)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43503)